अनियमिततामा डुब्दै स्थानीय तह, छोरा-बुहारी सडक बनाउने, बाबु अनुगमन गर्ने ! – Sagarmatha Online News Portal
अनियमिततामा डुब्दै स्थानीय तह, छोरा-बुहारी सडक बनाउने, बाबु अनुगमन गर्ने !
काठमाडौं । ‘अनियमिततामा डब्दै स्थानीय तह’ शीर्षकमा कान्तिपुरले स्थानीय तहभित्रका बेथितिबारे चिरफार गरेको छ । समाचार अनुसार, गाउँ–गाउँमा पुगेका सिंहदरबारहरू अनियमितताका अखडामा परिणत हुँदै जान थालेका छन् ।
यसको दृष्टान्तका रूपमा यसले केही नमूना प्रसंग उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्येको एक हो– विराटनगरको सडक निर्माण । कान्तिपुरका अनुसार, विराटनगर–१४ का दुई सडक बनाउन दुई बेग्लाबेग्लै उपभोक्ता समिति बनाइएका छन् । नौ सय मिटर र ३ सय ५० मिटर लम्बाइका ती सडक बनाउन गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सोही वडाका कार्यवाहक वडाध्यक्ष महिचन्द्र यादवका मामाका छोरा–बुहारी हुन् । तिनको अनुगमन समिति संयोजक भने पदाधिकारीमध्येकै एक जनाका बुबा छन् ।
उता कर्णालीका स्थानीय तहमा पनि उस्तै विकृति भित्रिएका छन् । पालिकैपिच्छे उजुरीका चाङ रहेको र निर्दे्शिका मिच्दै रकम बाँडिएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ । प्रदेश २ मा त एउटै योजनामा २ पटकसम्म बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ ।